I-Garden Suite ilala abantu abayi-5 kwindawo yokubasa umlilo - I-Airbnb
I-Garden Suite ilala abantu abayi-5 kwindawo yokubasa umlilo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCarol And Geoff
UCarol And Geoff yi-Superhost
Sinendawo entle epholileyo enamagumbi okulala ama-2 alala ukuya kutsho kubantu aba-5. Izindlu zokuhlambela ezi-2 ziya kuqinisekisa ukuba awuzukulinda.
Igumbi lokuhlala linendawo yokupholisa umoya kunye nendawo yomlilo enamaplanga. Ikwanayo neTV kunye neNetflix.
Ngoku sibandakanya ikhitshi eligcweleyo kunye nendawo yokutyela. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, imicrowave, iketile, itoaster kunye nomatshini wekofu.
Sime eStanthorpe, uhambo olulula (imizuzu esi-7) okanye uqhube ukuya edolophini, apho sineendawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile esinokuzijonga.
I-Garden Suite ngenye yeeyunithi eziyi-3 kwiQueenslander yakudala eyayitshintshwe yayiflethi ngeminyaka yoo-70.
Sineeyunithi iminyaka eyi-13, njengemali, ngoxa sihlala eBrisbane.
Sathandana noStanthorpe ngexesha lokutyelela kwethu saza sathatha umhlala-phantsi kwangoko, ukuze senze iStanthorpe ibe likhaya lethu, sihlala kwenye yeeyunithi.
Emva kokusebenza nzima ukulungisa, ngoku sisebenzisa ezinye iiflethi eziyi-2 ukususela ngoJuni ukuya ngo-Oktobha kwaye siqesha kubasebenzi bexesha elithile lasehlotyeni. Siyabuthanda obu bomi kwaye sidibana nabantu abanobubele kakhulu ebudeni benkqubo. Sikwaqeshisa nenye iyunithi, "iCourtyard Suite" elala abantu abayi-4. Ukuba kwidilesi efanayo, kwenza kube mnandi ukuba amaqela amakhulu abantu abafikelela kwabayi-9 ukuba uqeshisa ngazo zombini iiyunithi.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle linegumbi lokulala eliphambili elinomnyango ophumela ngaphandle. Inento eyenza kufudumale neengubo zombane ukuze uhlale ushushu kwimozulu yethu yasebusika ebandayo. Umatrasi osemgangathweni nezinto zokondlula ibhedi ziza kuqinisekisa ukuba ulala kamnandi ebusuku. Igumbi lokulala lineshawa, isitya sokuhlamba izandla kunye nendlu yangasese.
Igumbi lesibini linematrasi elala abantu ababini nebhedi enye, kunye neematrasi ezisemgangathweni kunye neengubo zombane.
Igumbi lokuhlambela elisondeleyo kwigumbi lesibini kwaye linebhafu eneshawa, i-handbasin kunye nendlu yangasese. Sinamanzi ashushu ashushu ngoko nangoko asoze aphele.
Indawo yokuhlala inendawo yomlilo entle eneenkuni ezininzi zokubasa, ukuze yonke indawo ibe ntle kwaye itofotofo. Ungakhathazeki, sinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ukuba awuwuthandi umlilo okanye uyaphuma. I-TV ephucukileyo, epheleleyo kunye neNetflix kunye nemidlalo ethile yebhodi iza kwenza abantwana kunye nabantu abadala bonwabe.
Ikhitshi linayo yonke into oyidingayo ukuze uhlale kamnandi, kuquka ifriji enkulu, umatshini wokwenza ikofu, iketile, i-microwave, i-crockery, izinto zokupheka kunye nezinto zokupheka. Siquke iti, ikofu, ubisi kunye nezinye izinto zokupheka ukuze ungasokoli.
Indawo yokutyela ikufutshane nekhitshi.
Kukho nendawo yangaphandle ye-bq onokuyisebenzisa ngokukhethekileyo. Le ndawo ikufutshane negadi kunye nendawo entle yokufumana i-cuppa ngentsasa enelanga.
Sinendawo yokupaka imoto esesitratweni eyi-1 nendawo yokupaka iimoto ezongezelelekileyo ukuba kuyimfuneko.
Sinendawo yokuhlamba iimpahla esetyenziswa nangabanye abantu enomatshini wokuhlamba impahla ophindwe kabini, umgca weempahla zangaphandle, indawo yokuxhoma iimpahla yangaphakathi, iayini kunye nebhodi yokuayinela. Kukho indawo yokuhlamba iimpahla esedolophini ukuba ufuna into evuzayo.
Le ndlu ifumaneka lula kufutshane nedolophu, umzuzu nje oyi-7, uhamba ngeenyawo okanye imizuzu embalwa uhamba ngemoto. Sineevenkile zokutyela ezininzi edolophini, ngoko akuyomfuneko tu ukuba upheke.
Ukhenketho lweendawo zewayini yindlela entle yokutyelela le ndawo ngaphandle kokukhathazeka ngokuqhuba. Baza kukuqokelela ngqo kwindawo yethu yokungena imoto.
Sihlala kwisayithi yethu, ngoko ukuba ufuna nantoni na, okanye ufuna izinto ezongezelelweyo, iitawuli, njl. ungonqeni ukusithumelela umyalezo, sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kube tofotofo kakhulu.
Sikhangele phambili ukudibana nawe.
UCaroline noGeoff Saunders
Sikufutshane edolophini apho unokufumana iikhefi ezininzi kunye neeresityu ukuze uhlangabezane neemfuno zakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Carol And Geoff
Sihlala kwindawo, kwiyunithi eyahlukileyo ukuze sifikeleleke ngokulula ukuba usidinga ngayo nantoni na okanye usicebise.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stanthorpe